China pp oghere mpempe akwụkwọ, p corrugated mpempe akwụkwọ Manufacturer na Supplier | Sihai
Pp oghere mpempe akwụkwọ (Polypropylene Hollow Corrugated Plastic Sheet) bụ mpempe akwụkwọ ejima ejiri agbapụta nke nwere mgbidi abụọ dị larịị nke jikọtara ọgịrịga vetikal. Pp oghere mpempe akwụkwọ makwaara dị ka pp corrugated mpempe akwụkwọ, p corrugated osisi, p oghere oghere, p corflute mpempe akwụkwọ, p ọjà, pp correx mpempe akwụkwọ na p coroplast mpempe akwụkwọ.
Pp oghere mpempe akwụkwọ (Polypropylene Hollow Corrugated Plastic Sheet) bụ mpempe akwụkwọ ejima ejiri agbapụta nke nwere mgbidi abụọ dị larịị nke jikọtara ọgịrịga vetikal. Pp oghere mpempe akwụkwọ makwaara dị ka pp corrugated mpempe akwụkwọ, p corrugated osisi, p oghere oghere, p corflute mpempe akwụkwọ, p ọjà, pp correx mpempe akwụkwọ na p coroplast mpempe akwụkwọ. pp oghere mpempe akwụkwọ na-arụpụtara site na nnukwu mmetụta co-polymer polypropylene (PP), nke nwere ike ịmegharị, na-ere ọkụ, na-adịgide adịgide ma nwee ike iji ya mee ihe ọzọ. , mgbasa ozi, iwu ulo, oru ubi, ulo oru na ogwu wdg.
Anyị nwere ike ahaziri mere ọkpụrụkpụ si 2mm -12mm, ejikari, ndị 2-5mm oké bụ isi na-eji nkwakọ ngwaahịa, na 4-6mm oké na-eji nke mgbasa ozi, dị ka dị iche iche ngwa, na GSM nwere ike ahaziri mere, elu GSM osisi dị ike. Pp oghere mpempe akwụkwọ bụ ihe ọhụrụ nwere ike iji mee ihe na ụdị ọrụ ọ bụla, ọ bụ ihe na-agbanwe agbanwe nwere ike ịhazi ya site n'ụdị ọ bụla, nha ọ bụla. The p oghere oghere dị ka dị iche iche ngwa, ọ nwere ike mere ire ọkụ retardant p osisi, ESD p corrugated mpempe akwụkwọ, na UV chebe pp oghere mpempe akwụkwọ, ọ nwekwara ike mere corona ọgwụgwọ maka obibi akwụkwọ iji.
2-12mm p oghere mpempe akwụkwọ, p corrugated mpempe akwụkwọ nkọwapụta
Ọkpụrụkpụ 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9-10mm 11mm 12mm
Agba na nha Ahaziri agba, ahaziri size (max obosara 2300mm, ogologo ọ bụla size)
Nhọrọ 1.Flame Retardant
Eyi oghere mpempe akwụkwọ:
1) Light Light, siri ike
2) Innocuous, na-abụghị uto, Mmetọ-free
3) Waterproof, mmiri na-eguzogide
4) Shock na-eguzogide ọgwụ, ịka nká na-eguzogide ọgwụ, corrosion na-eguzogide ọgwụ, Okpomọkụ mkpuchi
5) Ntughari \_ gburugburu ebe obibi
6) colorbara na agba, ahaziri size, mgbanwe iji
Eyi oghere mpempe akwụkwọ nwere ìhè arọ, ike, edo ọkpụrụkpụ, ezigbo n'elu, ezi okpomọkụ na-eguzogide, elu n'ibu ike, magburu onwe chemical kwụsie ike na eletriki mkpuchi, na-abụghị ndị na-egbu egbu e ji mara. O nwere ike ịbụ dị ka dị iche iche ngwa tinye ESD ihe onwunwe mere ESD pp oghere mpempe akwụkwọ, tinye UV ihe mere UV echebe pp corrugated mpempe akwụkwọ na na. Yabụ na ọ bụ ngwongwo na-agbanwe agbanwe enwere ike iji ya rụọ ọrụ niile.
Eyi corrugated mpempe akwụkwọ ngwa:
1. ulo oru ngwaahịa nkwakọ ntụgharị: nkwakọ ntụgharị igbe, storages igbe, nkwakọba igbe, nkwakọba akpa, mbupu igbe, mbukota igbe, ESD igbe, ESD nkwakọ igbe, electronic components nkwakọ ntụgharị igbe, plastic akụkụ ntụgharị igbe, nkebi nkebi, ESD oghere board ntụgharị ntụgharị, igbe na-enweghị oghere na-agbanwe igbe.
2. Ileba na akpa na-akwado mbadamba: ikpe na akpa lining board, ikpe na akpa na-akwado mbadamba, nkebi osisi.
3. kalama, ụlọ ọrụ silk spins: mpe akwa karama oyi akwa, mpe akwa karama oyi akwa, Mkpọ ngwaahịa oyi akwa na mpe mpe akwa, silk spins oyi akwa na mpekere, karama nkewa, pallet oyi akwa na mpe mpe akwa, pallets mbukota na mpe mpe akwa
4. Machinery ụlọ ọrụ: Machine kwushin oyi akwa na mpe mpe akwa, igwe plastic akụkụ, igwe akụkụ divider.
5. Advertising ụlọ ọrụ: eyi oghere osisi ngosi igbe, ngosi ogbe, mgbasa ozi osisi, Corona osisi, coroplast ịrịba ama, banye osisi, ngosi igbe, p corrugated ịrịba ama, p oghere mpempe akwụkwọ mgbasa osisi
6. Ime ụlọ mma: uko ụlọ, grille sheet, mposi nkebi, igbe igbe, storages container
7. ngwá ụlọ ọrụ: tea table ute board, ngwá ụlọ mma board.
8. Agriculture: ụdị mkpụrụ osisi dị iche iche, igbe nri, igbe pesticide, igbe nri, igbe ihe ọverageụverageụ; Greenlọ griin ha.
9. sọọsọ na egwuregwu ngwaahịa: smart bọọdụ, file akpa, faịlụ igbe.
10. Automobile ụlọ ọrụ: n'iru wheel na mpe mpe akwa, ụgbọ ala ọdụ efere, oyi akwa na mpe mpe, akpaaka akụkụ divider, akpaaka ntụgharị igbe, na akpaaka akụkụ nchekwa igbe
11. ụlọ ọrụ eletriki: friji backboard, igwe na-asacha azụ backboard, friji nkebi.
12. Ngwaahịa ụmụaka: akụkụ ahụhụ, ụgbọ mmiri na-adọkpụ, ọdụ ụgbọ mmiri, nsogbu ụmụaka nwere ọgụgụ isi.
Eyi oghere mpempe akwụkwọ na-ọtụtụ-eji, na ngwa ubi na mgbe nile penetration, naanị mepụtara akụkụ ya, e nwere ọtụtụ ebe a ga-mepụtara.
Eyi plastic oghere osisi ngwa:
1. Ogwe mgbasa ozi;
2. Igbe ndị na-emegharị ihe, tinyere igbe ndị na-emegharị ihe, igbe ntụgharị, igbe akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi, igbe nchekwa akwa, na igbe ụlọ ọrụ maka ọrụ dị iche iche;
3. Mbadamba ụlọ ọrụ mmepụta ihe, gụnyere waya na eriri mkpuchi nkwakọ ngwaahịa dị n'èzí, iko, efere ígwè, ihe dị iche iche na-echekwa nkwakọ ngwaahịa dị n'èzí, pad, racks, partitions, plate plate, kaadi ogige, wdg;
4. Ogwe nchedo, oge iji kaadiboodu na plywood atọ iji chekwaa ihe eji ewu ụlọ na owuwu. Site na ọganihu nke oge na mmetụ nke uto, hụ na e mere ihe ndozi ihe ịchọ mma zuru ezu tupu emechaa ihe owuwu ahụ na nchekwa kwesịrị ekwesị iji nye ọrụ ahụ Economy, nchekwa na ịdị mma, yana nchedo maka mbuli ụlọ na ala tupu ịnakwere .
Nke gara aga: pp corrugated partiton
Osote: pp corrugated ntụgharị igbe